Faah faahin: Xoogaga AMISOM oo rayid ku laayay Shabellaha Hoose | Dhacdo
Home Wararka Maanta Faah faahin: Xoogaga AMISOM oo rayid ku laayay Shabellaha Hoose
Faah faahin: Xoogaga AMISOM oo rayid ku laayay Shabellaha Hoose
August 31, 2014 - Mogadishu, Somalia - Operation Indian Ocean was headed by the Ugandan contingent of AMISOM to retake the town of Kurtonwarey in Lower Shabelle. Ugandan troops gathering before the attack on Kurtonwarey. Lower Shabelle, 31 August 2014 Mogadishu Somalia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20140831_zaa_n230_212 Copyright: xNoexFalkxNielsenx
Faah faahino ayaa ka soo baxaya dilka toddobo qof oo rayid ahaa oo Ciidanka AMISOM ay Talaadadii shalay ugu gaysteen nawaaxiga deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Shan ka mida dadkan oo beeraley ahayd ayay Ciidanka AMISOM ka soo wateen beer ku taala tuulada Faarax, ka dibna ay toogteen.
Dadka ay dileen Ciidanka AMISOM ayaa waxaaa ka mid ah milkiilihii beertaasi oo lagu magacaabi jiray Cumar Ganey. Ninkan ayaa caan ka ahaa deegaankaasi.
Cumar Ganey ayaa lala dilay afar ka mida shaqaalihii beertiisa ka shaqeynaysay, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Labada nin ee kale ee ay Ciidanka AMISOM toogteen ayaa ahaa baabuurey oo gaarigii ay wateen kaga ciladooday wadada horumarta beertaasi, isla-markaana ay nasiino u taggeen beertaasi.
Dadka deegaanka ayaa Ciidanka AMISOM ku eedeeyay in dilka ka dib ay dhibaneyaasha ku dul geeyeen dhul ay miino ku aasneyd, isla-markaana ay ku qarxiyeen.
Maxamed Yoonis Aadan oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa sheegay in wiil uu dhalay uu ka mid ahaa toddobo qof ee halkaasi lagu dilay.
“Wiilkeyga iyo lix ruux kale ayay Ciidanka AMISOM qabteen oo ay garbaduub u xireen, ka dib goobta ayay ku dileen toddobada ruux, oo ay ku jiraan dad iska leh beerta uu wiilkeyga ka shaqeynayay iyo dhallinyaro kale oo gaari goobta uga halaabay. Markii ay toogteen ka dib waxa ay dul geeyeen miino dhulka ku aasneyd, halkasi ayay haddana miinadii kula qarxiyeen.” Ayuu yiri Maxamed Yoonis oo la hadlay Radio Muqdisho.
Maxamed Yoonis ayaa Dowladda Federaalka ka codsaday inay xaqooda uga soo dhiciso Ciidanka AMISOM, oo bilaa sabab ku dilay dad aan waxba galabsan.
Dilkan ayaa carro dadweyne ka abuuray deegaanka Golweyn, oo qiyaastii 20km u jira Degmada Qoryooley.
Dhanka kale qoraal lagu daabacay barta AMISOM ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in Ciidanka Uganda ee ka tirsan AMISOM ay dileen toddobo ka mida maleeshiyada Al Shabaab, ka dib markii ay jidka u galeen ciidamada, xilli ay hawlgal amni xaqiijin ah ka wadeen wadada xiriirisa Golweyn iyo Baladul Amiin. AMISOM ayaa sidoo kale soo bandhigtay hub iyo calanka Al Shabaab.
Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa waxaan jirin cid kula xisaabtanta dilka dadka rayidka.
Previous articleQoorqoor oo gudbiyay qayb ka mida musharaxiinta u tartamaysa Aqalka Sare
Next articleSenatorada Puntland ku metelaya Aqalka Sare oo maanta lagu dooranayo Garoowe